Paranoia (2013) | MM Movie Store
ဒီကားလေးကတော့ တကယျ့ Thrillerဇာတျကောငျးလေးပါ.ဇာတျကှကျအပွောငျးအလဲတှနေဲ့ ပရိသတျကိုအဆုံးသတျထိဆကျကွညျ့စခေငျြမယျ့ဇာတျကားလေးဆိုလဲ မမှားပါဘူး
ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ငယျယျရှယျရှယျနဲ့ အောငျမွငျခငျြတဲ့ အဒမျကတျစီဒီဟာနာမညျကွီး နညျးပညာကုမ်ပဏီဖွဈတဲ့ ဝိုကျဈမှာဝငျရောကျလုပျကိုငျဖို့ ပရောဂကျြကို တငျပွခဲ့ပမေယျ့လညျးငွငျးပယျခွငျးကို ခံခဲ့ရပါတယျ.
အဒမျသာ လူငယျပီပီ မိုကျရုးရဲဆနျစှာနဲ့ ပရောဂကျြလုပျဖို့ကုမ်ပဏီကပေးထားတဲ့ ထောကျပံ့ငှကေို သုံးပွီးသူငယျခငြိးတှနေဲ့ ပြျောပါးသောကျစားပဈခဲ့ပ့ါတယျ.
အဲ့ကိစ်စကို ဝိုကျဈဖကျဒျက သိတဲ့အခါမှာ သူ့ကို ငှအေလှဲသုံးစားမှုနဲ့တရားစှဲမယျ ငွိမျးခွောကျပွီး သူတို့ကုမ်ပဏီရဲ့ ပွိုငျဘကျကုမ်ပဏီဖွဈတဲ့အိုကျကှနျကုမ်ပဏီရဲ့နညျးပညာလြှို့ဝှကျခကျြတှကေိုခိုးယူဖို့ အတငျးအကွပျခိုငျးခဲ့ပါတယျ.
အဒမျဟာ အိုကျကှနျကုမ်ပဏီရဲ့လူယုံဖွဈလာတဲ့အခါမှာတော့ကုမ်ပဏီနှဈဦးရဲ့လှညျ့ကှကျတှကေို နားလညျပွီးသူဟာဓားစာခံဖွဈမှနျးမသိပဲ ဖွဈနခေဲ့တာကိုပါနလညျခဲ့ပါတယျ.အဒမျဟာ ကုမ်ပဏီနှဈခုရဲ့ယှဉျပွိုငျမှုကွားကနဘေယျလိုလှတျမွောကျအောငျ ကွံစညျအားထုတျသှားတယျ.
ကုမ်ပဏီကွီးတှရေဲ့ပွိုငျဆိုငျမှုက ဘယျလောကျထိနကျနဲတယျဆိုတာကိုရိုကျပွထားတဲ့ သညျးထိတျရငျဖိုဇာတျလမျးဖွဈတာကွောငျ့ရုပျရှငျခဈြသူတို့ လကျမလှတျသငျ့တဲ့ဇာတျလမျးလေးပါလို့ ညှနျးလိုကျပါရစဗြော…
ဒီကားလေးကတော့ တကယ့် Thrillerဇာတ်ကောင်းလေးပါ.ဇာတ်ကွက်အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ ပရိသတ်ကိုအဆုံးသတ်ထိဆက်ကြည့်စေချင်မယ့်ဇာတ်ကားလေးဆိုလဲ မမှားပါဘူး
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ငယ်ယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အောင်မြင်ချင်တဲ့ အဒမ်ကတ်စီဒီဟာနာမည်ကြီး နည်းပညာကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ ဝိုက်စ်မှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ ပရောဂျက်ကို တင်ပြခဲ့ပေမယ့်လည်းငြင်းပယ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်.
အဒမ်သာ လူငယ်ပီပီ မိုက်ရုးရဲဆန်စွာနဲ့ ပရောဂျက်လုပ်ဖို့ကုမ္ပဏီကပေးထားတဲ့ ထောက်ပံ့ငွေကို သုံးပြီးသူငယ်ချငိးတွေနဲ့ ပျော်ပါးသောက်စားပစ်ခဲ့ပ့ါတယ်.
အဲ့ကိစ္စကို ဝိုက်စ်ဖက်ဒ်က သိတဲ့အခါမှာ သူ့ကို ငွေအလွဲသုံးစားမှုနဲ့တရားစွဲမယ် ငြိမ်းခြောက်ပြီး သူတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့အိုက်ကွန်ကုမ္ပဏီရဲ့နည်းပညာလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုခိုးယူဖို့ အတင်းအကြပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်.
အဒမ်ဟာ အိုက်ကွန်ကုမ္ပဏီရဲ့လူယုံဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ကုမ္ပဏီနှစ်ဦးရဲ့လှည့်ကွက်တွေကို နားလည်ပြီးသူဟာဓားစာခံဖြစ်မှန်းမသိပဲ ဖြစ်နေခဲ့တာကိုပါနလည်ခဲ့ပါတယ်.အဒမ်ဟာ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုရဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုကြားကနေဘယ်လိုလွတ်မြောက်အောင် ကြံစည်အားထုတ်သွားတယ်.
ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုက ဘယ်လောက်ထိနက်နဲတယ်ဆိုတာကိုရိုက်ပြထားတဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်လမ်းဖြစ်တာကြောင့်ရုပ်ရှင်ချစ်သူတို့ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပါလို့ ညွှန်းလိုက်ပါရစေဗျာ…